इतिहासका निर्माता जनता हुन् भन्ने कुरा कालिकोटले पुष्टि गरेको छ : रणबिर | Namastepost.com
इतिहासका निर्माता जनता हुन् भन्ने कुरा कालिकोटले पुष्टि गरेको छ : रणबिर
अन्तरवार्ता May 16, 2017 ,
( स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उक्त निर्वाचनको विपक्षमा रहेको थियो । नेकपाले चुनाव खारेजिको अभियान चलाएको थियो । मतपेटिका समेत जलाएको कालिकोटमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर नमस्ते पोस्टले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम रणबिरसंग केही बेरअघि कुराकानी गरेका थियौं । )
* देश चुनावी प्रक्रियामा अगाडी बढ्यो, तपाइहरु चाहिँ छुट्नुभयो है ?
देश अगाडी बढेको हैन । पछाडितिर धकेल्ने कोसिस गरिदैछ । असफल सिद्ध संसदीय व्यवस्थालाई जबर्जस्ती लाद्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जनयुद्धमार्फत जनताले स्थापित गरेका मुल्य मान्यताहरु भत्काउन खोजिदैछ ।
अर्कोतिर हामी छुटेको भन्ने कुरा पनि गलत हो । हामीले एउटा स्वतन्त्र एवं स्वाधीन नयाँ राजनीतिक धार, नयाँ बिचार र जनताको नेतृत्व गरिराखेका छौं । हाम्रो योजनामा देशलाई अगाडि लिएर जाने उद्देश्यसहित नयाँ अभियानमा जुटिरहेका छौं । यो अभियानमा सफल पनि हुँदै गएका छौं ।
* सम्पुर्ण पार्टीहरू, मिडिया, राज्य र जनता एकातिर अनि तपाइहरुले चाहिँ कता हिड्न खोज्नुभएको हो ?
यो त अस्थायी कुरा मात्रै हो । निर्वाचनमा जनताले आस्था र विश्वासका साथ भाग लिएका छैनन् । औपचारिकता र बाध्यात्मक परिस्थितिमा अनिच्छासहित सहभागिता जनाएको हामीले पाएका छौं ।
यो चुनावले अहिलेको अन्तरबिरोध र संकटको दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान दिन सक्दैन । यसको सहि समाधान भनेको अहिलेको असफल व्यवस्थाको अन्त्य र बैज्ञानिक समाजबादी, जनबादी राज्य स्थापना हो । त्यसका निम्ति हामी अघि बढिरहेका छौं ।
* यसपटकको निर्वाचन खारेजीको अभियानमा हुनुहुन्थ्यो, चुनाव त सानदार रुपमा सफल भयो है ?
चुनाव नै प्रायोजित र षड्यन्त्रको रुपमा अगाडि सारिएको थियो । चुनावसम्बन्धि जेजति तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरिएका छन्, ती पनि नियोजित छन् । दशौं लाख युवाहरू बिदेशमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् ।
उनिहरु चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर हुनुपरेको छ । भुकम्पपिडित जनताहरुको अवस्था दर्दनाक छ। जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको एउटा ठुलो हिस्सा समग्र प्रक्रियासँग संबद्ध छैन । सहिद बेपत्त परिवार, घाइते योद्धाहरु असन्तुष्ट छन् ।
स्थानीय चुनावमा समेत सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य पुगेको छ । यसरी गरिएको चुनावले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
आफ्नो प्राजित सत्ताको अन्तिम रक्षाका लागि उनिहरु चुनावी आवरणमा जनताको बिचमा पुग्ने प्रयास गर्दैछन् ।
एउटा बिडम्बना र नयाँ कुरा भनेको, हिजो नयाँ सत्ताको नारा दिएर लडेकाहरु पनि अहिले पुरानो सत्ता रक्षाका निम्ति लागिरहेका छन् । यति हुदाहुदै पनि पुरानो सत्ताको पतन र नयाँ सत्ताको स्थापना अनिवार्य र अवश्यम्भावी छ ।
* तपाइको गृहजिल्ला कालिकोटमा हिंसात्मक घटना घटेका छन् । तपाई स्वयं पनि फिल्डमा बसेर त्यसको नेतृत्व गरेजस्तो देखिन्छ । जनताले मतदान गरिसकेपछि मतपेटिका जलाउनुभयो । यो जनताकै अधिकारको हनन भएन र ?
हामीले हिंसात्मक गतिविधि गरेका छैनौं । हिंसा त राज्यले गरिराखेको छ । आफुले हिंसा गर्ने अनि दोष जनता र क्रान्तिकारीहरुमाथी थोपर्ने गलत परम्परा छ ।
हामीसँग त हतियार पनि छैन केही पनि छैन । राज्यले नै हतियारधारी सेना पुलिसको बलमा जनता र हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई दमन गरिरहेको छ ।
घरमा खाना खाइरहेको मान्छेलाई बिनाकारण गिरफ्तार गर्ने कोसिस गरिएको छ । ब्यक्तिगत काममा हिडिरहेका मान्छेलाई समातेर सार्वजनिक मुद्दा चलाइएको छ
। माल्कोट या फुकोटको कुरा गर्नुहोस् पहिला राज्यले जनतामाथी हस्तक्षेप र दमन गरेको छ । त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा स्वभाविक र अनिवार्य हुन्छ भन्नुस न ।
* तपाइको गाउँमा प्रहरीको हतियार खोसेर भाचियो, उता प्रकाण्डको गाउँमा मतपेटिका जलाइयो । यो त नेताहरूको उक्सावटमा भएको जस्तो पनि देखिन्छ नि ?
नेताले उक्साउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन । बरु नेतालाई जनताबाट अलग्याउने या जनतालाई नेताबाट अलग्याउने साम्राज्यवादी रणनीतिलाई कालिकोटका जनताले फेरि एकपटक असफल पारिदिएका छन् ।
सयौंको संख्यामा हतियारधारी सेना पुलिस छ । तर हामीसँग त लठ्ठी पनि छैन । तर हामीले संचालन गरेका प्रतिरोध अभियान सफल भएका छन् । किनकी ती कार्यक्रमहरु ठुलो संख्यामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीतामा भएका छन् ।
नेता र जनता एकीकृत भएर षड्यन्त्र, दमन र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गरिएको छ । यो सकारात्मक एवं अनुकरणात्म कुरा हो ।
* माल्कोटमा मारिएका धनरुप बटाला राप्रपाको उम्मेदवार पनि रहेछन् । तर तपाइहरुले सहिद घोषणा गर्नुभयो ?
राज्यको गोलिले यदि कोहि निर्दोष नागरिक मारिन्छ भने त्यो सहिद हो । विगतमा सहिदलाई पनि पार्टीको घेराभित्र सिमित राख्ने गलत संकारको बिकास भएको छ ।
हामीले त्यसभन्दा माथी उठ्ने कोसिस गरेका छौं र गर्नु पनि पर्छ ।हो, धनरुप बटाला राप्रपाको पार्टी सदस्य र उम्मेदवार हुन् । उनी हाम्रो आव्हानमा भएको प्रतिरोध आन्दोलनमा मारिएका छन् । त्यसैले हामीले सहिद घोषणा गरेका हौं ।यसबाट हामीले नयाँ राजनीतिक सन्देश पनि दिन खोजेका छौं ।
जिवित मान्छे कुनै पार्टी बिशेषको हुनसक्छ र हुन्छ । तर सहिद साझा हुनुपर्छ । बटालाको रगतलाइ खेर जानदिनुहुदैन । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र परिवर्तनको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
* तपाइको पार्टीले भनेको एकीकृत जनक्रान्ती र कालिकोट घटनाको बिचमा के अन्तरसम्बन्ध छ ?
यो एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको एकदम व्यबहारिक प्रयोग र अभ्यास हो । हामीले युद्ध हैन क्रान्ति गर्ने भनेका छौं । जनताको समर्थन र सहभागीतामा पार्टीको नेतृत्वमा गरिने क्रान्तिको परिकल्पना गरेका छौं हामीले एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत ।
पार्टीको केन्द्रीय निति र योजनामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सचेत प्रतिरोध अभियान सफल भएको छ कालिकोटमा । कालिकोटले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ सन्देश प्रबाह गरेको छ ।
इतिहासका निर्माता जनता हुन भन्ने कुरा कालिकोटले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ । यसका लागि कालिकोटका जनतालाई बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ ।
* माओवादी केन्द्रलाई मुख्य तारो बनाउनुभयो भन्ने पनि आरोप छ नि ?
त्यो कुरा गलत हो । माओवादीहरुका बिचमा एकाअर्कालाई भिडाउने साम्राज्यवादी षड्यन्त्रलाई हामीले राम्ररी बुझेका छौं ।हामीले माकेलाई तार्गेट गरेको भए कहाँ यस्तो अवस्था आउथ्यो त ।
पार्टीको केन्द्रिय स्तरमै हामीले छलफल चलाएका छौं, जुन कुरा माकेलाई पनि थाहा छ । कुनै दल बिशेष हाम्रो निशानामा छैन र हुँदैन पनि ।
* जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुदैछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम के हुन्छ ?
हाम्रो खारेज अभियान निरन्तर थप शसक्त रुपमा जारी रहन्छ । हामी भ्रष्ट व्यवस्थालाई कुनै हालतमा संस्थागत हुन दिदैनौं ।
३ विभिन्न माओवादी समुहको एकताबाट बनेको माकेले अपेक्षित नतिजा हात पार्ने जस्तो देखिन्न । यसलाई कसरी लिनुभएको छ रु
यो अनिवार्य परिणाम थियो ।
माके अब खास माओवादी रहेन ।तर उनीहरुले जनतालाई भ्रममा पारेर माओवादीको नाममा राज्री शक्तिमा लुट मच्चाइ राखेका छन ।
त्यसको भण्डाफोर सहित जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड बाबुरामले जसरी बर्ग, जनता र राष्ट्रलाई धोका दिएका छन् त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ ।
माकेमा रहेका इमानदार नेताकार्यकर्ता एकपछि अर्को गर्दै सचेतापुर्वक क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणमा सहभागी भइराखेका पनि छन् ।
* खासगरी चुनावी नतिजातर्फ लक्षित गर्दै सबै माओवादी एक हुनुपर्ने आवाज पनि आइरहेका छन् के भन्नुहुन्छ ?
सम्भवत उनीहरुले अब एकताको कुरा जोडतोडले अगाडि बढाउने छन् ।यसमा कुनै भ्रममा पर्नुहुँदैन । सहिद बेपत्ता परिवार, माओवादी समर्थन, शुभचिन्तकहरु निराश हुनुहुदैन ।
सहिदका अधुरा सपनाहरू पुरा गर्ने अठोट सहित हामी उठेका छौं । सबै प्रकारका बिचलनलाई चिर्दै हामी निरन्तर अघि बढ्नेछौं क्रान्ति, परिवर्तन र राष्ट्रियताको पक्षमा ।